भूकम्प पिडितलाई कति राहत वितरण गरियो ? (सरकारी वितरण विस्तृतमा) - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौ, बैशाख २३ – सरकारले बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पमा परी पिडित बनेका नागरिकहरुलाई हालसम्म केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत एक अर्व ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकाशा गरिएको जनाएको छ ।
सरकारले कोषमा भूकम्प गएको अर्काे दिन बैशाख १३ गते प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषबाट ५० करोड, १६ गते एक अर्व र १९ गते ५० करोड गरी दुई अर्व प्राप्त भएकोमा हालसम्म झण्डै पौने दुई अर्ब रुपैयाँ विभिन्न जिल्लाहरुमा तत्काल राहतका लागि निकाशा गरिएको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले हालसम्म विभिन्न जिल्लाका पिडितहरुका लागि हालसम्म ९६ हजार दुई सय ३६ क्विन्टल चामा, ६ सय २० क्विन्टल चिनी, पाँच सय ७३.५ क्विन्टल नुन, एक लाख ८१ हजार एक सय ३४ कार्टुन चाउचाउ, दुई हजार ६ के.जि. भुजिया, तीन हजार दुई सय ४९ क्विन्टल च्युरा,१२ हजार सात सय ९८ केस पानी वितरण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै २९ हजार पाँच सय ३५ कार्टुन विस्कुट, ७५ बोरा दालमोठ र तीन हजार ६ सय बोरा दाल(सिमी) वितरण गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै हालसम्म टेन्ट तथा त्रिपाल एक लाख ६० हजार सात सय ९९ थान वितरण भइसकेको सरकारले जनाएको छ । ती त्रिपालहरु रेडक्रस, स्थानीयनिकाय, शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै मंगलबार मात्र एक लाख टार्पोलिन भारतबाट प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।
विपदको बेलामा विभिन्न छिमेकी तथा सहयोगी मुलुकहरुबाट राहत वितरण भइरहेको सरकारले जनाएको छ । त्यसमध्य भारतबाट चार हजार पाँच सय २३ कम्बल, तीन हजार पाँच सय २८ थान सोलार, तथा सावुन, पानी शुद्धीकरणका सामानहरु प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै चिनबाट टेन्ट दुई हजार ५३, त्रिपाल ७८ थान, कम्मल आठ हजार चार सय ४०, जेनेरेटर तीन सय तथा मेट्रेस ४० थान प्राप्त भएको सरकारले जानकारी दिएको छ । हालसम्म विभिन्न १८ राष्ट्र र दुई वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ । यस अवधिमा भारत, चीन, बंगलादेश म्यानमार पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, इन्डोनेशिया, अजरवैजान कोरिया, अल्जेरिया, मर्सि, ओमन, स्वीट्जरल्याण्ड, सिंगापुर, जर्मनी, क्यानाडा, जापान, नेदरल्याण्ड लगायतका मुलुकहरुबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै भूकम्प पिडितको उद्धारमा हालसम्म नेपाली सेना ६५ हजार १६ जना, नेपाल प्रहरीबाट ४१ हजार सात सय ७६ सशस्त्र प्रहरीबाट २४ हजार सात सय ७५ र निजामती कर्मचारी २२ हजार पाँच सय खटिरहेको सरकारले जनाएको छ । यस मध्ये खोज तथा उद्धारमा खटिएका टोलीहरु मध्ये ३४ टोली मित्रराष्ट्रबाट चार हजार ५० व्यक्ति र एक सय २९ कुकुर हरु परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ । हाल मित्रराष्ट्रबाट आएका उद्धार टोलिलाई फिर्ता पठाइरहेको सरकारले जनाएको छ । ती मध्ये केही गइसकेका र केही जाने क्रममा रहेको जनाएको छ । विशेष गरी अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य टोलीहरुको संख्या ८७ टोलीमा एक हजार चार सय भन्दा बढी रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य टोलीमा एक सय टोलीमा एक हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्धारका लागि हालसम्म नेपाली सेनाले ६ वटा, निजी क्षेत्रको ६ वटा, इन्डियन एयरफोर्सको ६ वटा काठमाडौं वेश भएर, तथा पोखरा वेश भएर ६ हेलिकोप्टरहरु गोरखाका लागि परिचालन गरिएको छ । १३ गतेदेखि हालसम्म नेपाली सेनाले ६ सय आठ ,निजीले चार सय ८७, भारतीयले दुई सय ६३ तथा पोखराबाट गोरखा एक सय ९० फ्लाइट गरिएको छ । भारतबाट १४ वटा हेलिकप्टरबाट चार सय ५३ फ्लाइट गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा हेलिकप्टरबाट एक लाख २३ हजार तीन सय ८० किलो खाद्य सामाग्री लगिएको छ भने आठ सय आठ जनाको उद्धार गरिएको छ । सरकारले विदेशी मुलुकहरुले दिने भनेको सहयोग मध्य हालसम्म एशियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट ३२ लाख युएस डलर र भुटानका प्रधानमन्त्रीबाट १० लाख डलर सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।
भूकम्पमा परी हालसम्म सात हजार चार सय ९३ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये निजामति कर्मचारीको संख्या १२, नेपाली सेना ९, प्रहरीको संख्या ४ र सशस्त्र प्रहरीको संख्या १ समेत त्यसमा समावेश भएको सरकारले जनाएको छ । मृतक भएका मध्ये सात हजार तीन सय ६९ शवहरु बुझाइसकिएको र त्यस मध्ये ५८ जना विदेशीहरुको शव पनि रहेको सरकाले जनाएको छ । घाइतेहरुको संख्या १४ हजार तीन सय ७१ रहेको सरकाले जानकारी दिएको छ । भूकम्पका कारण हालसम्म दुई लाख पाँच सय ५२ घरहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएको र एक लाख ८६ हजार २८५ घरहरु आंशिक रुपमा क्षति भएको सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै हालसम्म हालसम्म हवाइजहाजबाट र सतहबाट उद्धार गरिएकोमा भग्नावशेषबाट सर्च एण्ड रेस्क्यु टिमले जम्मा १६ जना मानिस उद्धार गरेको छ भने ३१ वटा जिल्लाहरु प्रभावित भएकोमा १४ जिल्लालाई अति प्रभावित जिल्लाका रुपमा सरकारले घोषणा गरेको छ ।